Boqor Buurmadow oo laga sii daayay xabsi kuyaala magaalada Hargeysa - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaBoqor Buurmadow oo laga sii daayay xabsi kuyaala magaalada Hargeysa
June 20, 2018 Puntland Mirror Somalia, Somaliland 0
Hargeysa-(Puntland Mirror) Boqor Cusmaan Aw-maxamuud Buurmadow ayaa maanta oo Arbaco ah laga sii daayay xabsi kuyaala magaalada Hargeysa.
Masuuliyiin katirsan maamulka Somaliland ayaa warbaahinta u sheegay in boqorka lagu sii daayay cafis madaxweyne.
Boqor Buurmadow ayaa xabsi kuyaala Hargeysa ku xirnaa muddo ka badan labo bilood. Maamulka Somaliland ayaa boqorka ku eedeeyay waxay ugu yeereen hadalo lid ku ah gooni isu taaga maamulkaas oo uu ka sheegay xilli uu ka qeybgalayay caleemosaar hoggaamiye dhaqameed ka dhacday deegaanka Carmo ee Puntland.
Maxkamad kutaala Hargeysa ayaa dhawaan boqorka ku xukuntay muddo saddex sanno oo xabsi ah.
March 2, 2018 Dowladda federaalka Soomaaliya oo sharci daro ku tilmaamtay heshiiska u dhaxeeya maamulka Somaliland iyo shirkadda DP World
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya oo u safray Itoobiya
Mogadishu-(Puntland Mirror) At least eight people have been killed in Mogadishu on Wednesday when a car packed with explosives rammed into a hotel, security and medical sources say. The attack on Posh hotel was followed [...]